Facebook အွန်လိုင်းမော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
News » Facebook အွန်လိုင်းမော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲ	2
Posted by King of Secrets (Bo Min) on Jun 28, 2012 in News |2comments
King of Secrets (Bo Min) has written 12 post in this blog.
View all posts by King of Secrets (Bo Min) →	Blog
TNA says: ဟယ်လှတာ။ ဖြူဖြူလေးကိုကြိုက်တယ်။ သူဂ တန်ဂိုးရှိမှမြင်ရတာရှိုလား။ နာမြင်ရတယ်ဟေဟေ့။ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါအုံး။ နောက်တော့အဆင်ပြေမှာပါ။
Was this answer helpful?LikeDislike 147
King of Secrets (Bo Min) says: I like it.
Comments By Postအတု - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်သဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - အရီးခင်လတ် - Mr. MarGaရွာသူ/သားများ အတွက် - မောင် ပေ - Ko chogyi``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - အလင်း ဆက် - သူကလေးသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - mee lay - Mr. MarGa၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Mr. MarGa - မင်းမင်းမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - kaiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - Mr. MarGaကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ -etone - kyeemiteအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာမန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ - KZ - kaiအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - အရီးခင်လတ် - ဦးကြောင်ကြီးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Myo Thantမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - ရဲစည် - မောင် ပေ``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ခင် ခ - Munetezအိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - သူကလေးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities